How'd it happen and more reports?: စကာင်္ပူက MRT နှင့် ဘာတ်စ်ကားပေါ်မှာ ရေသောက်တတ် ချိုချဉ်ငုံးတတ်ရင် သတိထားကျပါ....
စကာင်္ပူက MRT နှင့် ဘာတ်စ်ကားပေါ်မှာ ရေသောက်တတ် ချိုချဉ်ငုံးတတ်ရင် သတိထားကျပါ....
ဝါးးးရင်းးး ရထားးစီးးမိလို့ ဒီလို အဖြစ်မျိုး ကြုံခဲ့ရင့်
စလုံးမှာ fri'တွေ ရှိရင် နီးစပ်ရာပြောပြသတိပေးကြပါနော် !
Yishun' MRT' နားး မှာ ဖြစ်ပျက် သွားပုံလေးးပါ ။
MRT' ထဲ မှာ အစား အသောက် မစားးရဘူးးးး
အအေးး ဖျော်ရည် ရေ သောက်လို့ မရဘူးးးးးးးး
FINE' $500 ဆိုတဲ့ LAW' ထုပ်ထားတယ် ဆိုတာ
စင်ကာပူရောက် ရွှေမြန်မာ တိုင်းး သိပြီးဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် အခုအမျိုးသမီးရဲ့ ဖြေရှင်းချက်ကမှန်ကန်ပါတယ် ။
သူမ ဟာ ရထားစီး ရင် မူးတတ်တယ် ! ရေအမြဲ ဆာတတ် တယ် ! ဒီလို အခါမျိုးမှာ သူမ ဟာမူးလဲ တာ ဘာညာ မဖြစ် အောင်
ချိုချဉ် သကြားလုံး အမြဲ ငုံ ထားတတ် ပါတယ် တဲ့ ။
ဒါကို စလုံးး MRT ' တာဝန် ရှိ သူ တစ်ယောက်က မြင်
တွေ့ ပြီးး MRT' ထဲ ချိုချဉ် သကြားလုံးလေးငုံ ထား
တာကို သူတို့ ထုပ်ထားတဲ့ LAW' နဲ့ ငြိပါတယ် ဆိုပြီး
first time 'မို့လို့ ဒဏ်ငွေ $30 'ကျပ် ပေးဆောင်
ရန် ပြောဆို နေကြ ပုံ short video' လေးးပါ ။
တကယ် လို့ များ သူမ နေရာမှာ ညီမတို့ ရွှေမြန်မာတွေရဲ့
အကျင့် အတိုင်း City Hall' က ကအပြန် ကွမ်းယာလေး
ဝါးလို့ ရထား စီးရင်း မတော်တဆ ဒီလိုမျိုးး တွေ့ဆုံ
ကြုံကြိုက် မိခဲ့မယ် ဆို ရင့် ဘာသာစကားပြောဆို
မှု မကျွမ်းကျင်ခဲ့ရင့် စိတ်ကသိကအောင့် ဖြစ်စရာပါ :-)lb'
PS. စလုံး တွေ ကြာလေ ကြာလေ နိုင်ငံခြားသားတွေ
အပေါ် ပိုပို လူပါးဝ လာလေလေ ပဲ ။ မြန်မာတွေအချင်းချင်း
ဒီအဖြစ်အပျက်လေးကို လက်တို့ သတိပေးလိုက်ကြပါဦးး !
Post by Myat Hein Khant.
Posted by Ko Nge at Thursday, November 13, 2014